Aragti Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Sida Sirdoonka Ku-saleysan Goobtu U Caawinayaan Suuq Geynta Gawaarida | Martech Zone
Dhawr sano ka hor, waxaan ka qayb galay tababar ku saabsan talo soo jeedinta saaxiibkay Doug Theis isku xirka Doug waa isku xirka ugu fiican ee aan ogahay sidaa darteed waan ogaa kaqeybgalkiisa inay faa iido leedahay… wayna dhacday Waxa aan bartay waxay ahayd in dad badani qalad ku galaan inay qiimo saaraan isku xirnaanta tooska ah, halkii ay ka ahaan lahaayeen xiriirka aan toos ahayn. Tusaale ahaan, waan bixi karaa oo waxaan isku dayi karaa inaan la kulmo shirkad kasta oo tiknoolajiyad suuq geyn ah si aan u arko haddii ay u baahan yihiin caawimaaddayda, ama waxaan waqti ku qaadan lahaa isku xirka dadka sida maalgashadayaasha, qareennada iyo xisaabiyeyaasha la soo shaqeeyay shirkadaha tikniyoolajiyadda suuq geynta oo fahmay goorta ay isticmaali karaan I caawi.
Casharkaasi qiimaha badan wuxuu ku fiday suuqgeynta. Dad aad u tiro badan ayaa diiradda saaraya yaa iska leh indhaha halkii aad si qoto dheer u fahmi lahayd cilaaqaadka iyo dabeecadaha rajadeenna iyo sida deegaankoodu u eg yahay. GoobtaIQ waxay umuuqataa inay sidaa sameyneyso - isku waafajinta dabeecadda goobta moobiilka ee macaamiisha iyo noocyada ay la jaan qaadayaan iyo go'aamada iibsiga ee ay sameynayaan.
At GoobtaIQ, waxaan aaminsanahay meesha aad tagto iyo halkaad joogtay, qeex qofka aad tahay iyo waxaad qabanayso. Iyada oo ay sii kordhayaan aalado goobta awood u leh, tikniyoolajiyadda ayaa hadda noo oggolaatay in aan fahanno safarka macaamiisha oo aan qeexno, abuurno, iyo bartilmaameedno qaybaha macaamiisha gaarka ah.
GoobtaIQ hadda waxay sii deysay Warbixinteeda Dayrta 2014 PIQonomics. Natiijooyinka la helay waxay muujinayaan in baabuurtu wax badan ka sheegaan macaamiisha maanta sida dadku u maleeyaan. Warbixinta ayaa si qoto dheer u qodeysa dhadhanka iyo dookhyada kala duwanaanshaha tirakoobka gawaarida leh waxayna siisaa macluumaad qiimo leh ganacsatada baabuurta ee raadineysa inay sifiican u beegsadaan ololahooda:
Gawaarida raaxada iyo milkiilayaasha SUV waxay u badan tahay inay Aasiyaan yihiin
Wadayaasha gawaarida kale ee shidaalka waxay u badan tahay inay leeyihiin heerar waxbarasho sare oo ay ku raaxeysan karaan bannaanka
Booqdayaasha iibinta yurubiyanka waxay u badan tahay inay yihiin Hispanic iyo Asian
Halka milkiilayaasha calaamadaha yurubiyanku ay noqdaan Caucasian
Milkiilayaasha Hyundai waxay u badan tahay 4x inay booqdaan DQ, Baskin Robbins iyo Dunkin Donuts
Tani waa fursad aan caadi aheyn oo loogu talagalay noocyada inay isku waafajiyaan dhammaan warshadaha si ay suuq u wadaagaan oo ula wadaagaan macaamiishooda. Waxaa laga yaabaa inaadan la yaabin inaad aragto a Lexus casuumaad marka xigta ee aad fadhiisato Warshad Cheesecake… Ama taa lidkeed! Taasi way i xasuusinaysaa… Checkey Pumpkin waa socdaa!
Tags: a & eabcqalabka hardwaretufaaxaarby'sAudiwarshadaha gawaaridasuuqgeynta gawaaridaqubeyska sariirta & wixii ka dambeeyaiibsashada ugu fiicantelefishanka BloombergBMWbaalal duurjoogta ahboqorka burgerbwwCBSChevroletbasbaaskachryslerCNNcaanaha qeendqESPNshan ninshabakadda cuntadaforddawacowakaalada wararka dawacadajimcahamakiinadaha guudadjuqraafigisgmcharris teeterkanaalka taariikhdadepot gurigahyundaihoopkiakohlskrogerdhul roverLexusLincolngoobtasuuqgeynta ku saleysan goobtacidestardabo dheergaariga raaxadamapkhariidayntaMazdaMercedes BenzMitsubishiraadraaca mobiladamootooyinkaNBCnfl redzonenickelodeonNissannordstromkeydka xafiiskapanerapetcomaxamedcilmi -baarisplaceiqaargoosatada caswarshadaha makhaayaddasuuqgeynta makhaayadaharuby talaadadaqoriilmoSonicmaamulka isboortigaqabatooyinsuburuTareenka hoosesuvdawan tacotgi jimcobakhaarka gurigatj-maxxtjmaxxtoyotakala saaridxamarVolvowalmartwendy'sCuntooyinka oo dhan
Nov 10, 2014 saacadu markay tahay 4:42 PM
Waan jeclahay shaqada PlaceIQ qabato, laakiin RUNTA, waxaad kahadashaa macluumaad qiimo leh sida: gawaarida raaxada iyo milkiilayaasha SUV waxay u badan tahay inay Aasiyaan yihiin, darawallada gawaarida shidaalka ee beddelka ahna waxay u badan tahay inay leeyihiin heerar tacliin sare oo banaanka ku raaxeysta… ..
Runtii ma u malaynaysaa in suuq kasta oo baabuur iibiya uu ka heli doono "macluumaadkan qiimaha leh"?
Nov 11, 2014 at 8: 48 AM
Arimahaas kaligood? Maya… laakiin qaabab isku dhafan oo ka caawinaya fahamka, farriinta iyo bartilmaameedyada dhagaystayaasha ayaa la caddeeyay tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee suuqgeynta keydka macluumaadka si loo kordhiyo sicirka beddelaadda.